आइतबारदेखि कर्फ्यू, घरबाहिर निस्कन प्रतिबन्ध ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/आइतबारदेखि कर्फ्यू, घरबाहिर निस्कन प्रतिबन्ध !
नेपाल सरकारले लकडाउन खोलेपछि तीब्र रुपमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा बढोत्तरी हुन थालेपछि देशभरका प्रशासनिक निकायहरुले विभिन्न निर्णय गरिरहेका छन् । यसैबीच, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले आइतबारदेखि लागू हुने गरी बढी भिडभाड हुने स्थान तोकेर अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) जारी गरेको छ ।
छिमेकी जिल्ला पर्सामा समुदायस्तरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको र बारामा समेत दैनिक संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकोले स्थान निर्धारण गरेर आइतबार बिहान ५ बजेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले बताए ।
निषेधित क्षेत्रभित्र कुनै पनि धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यहरु९विवाह, व्रतवन्ध, भोजभतेर० गर्न प्रतिवन्ध लगाइएको छ ।
यस्तै छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएका सीमा नाकाहरुमा आवात जावत पूर्णमा रुपमा बन्द गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले कलकारखाना सञ्चालन गर्दा कामदारलाई आफ्नो उद्योग, कलकारखाना परिसर भित्रको होस्टल तथा क्वाटरमा राखेर स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
२४ घण्टामा हालसम्मकै बढीको कोरानाले मृत्यु
मलाई बचाउनुहोस् …. २१ बर्से नेपाली चेली जिबन र मृ*त्यु संग लडिरहेकी छिन् .. ( भिडियो सहित )
रबि लामिछाने पत्नी निकिता पौडेल बाकसमा फालेको नानी कहाँ पुगीन्, के बच्चा पाल्न दिन्छन् त ?
प्रेमिका बिरामी भएपछि नायक पल शाह आत्तिएर दौडिँदै अस्पताल पुगे, आखिर के भयो गरिमालाई ? पलले समेच रुन्चे अनुहार लगाउँदै गरिमाले भेटे, कहिले डिस्चार्ज हुन्छिन् गरिमा ?i
नेपाली फिल्म ‘सेल्फी किङ’ युट्युबमा आयो (भिडियो हेर्नुस्)